Memeneda. Ayɛwoho da 4, afe 2020
Anokwale by GhanaThink, date(2019-9-19) - Wukuda. Ayɛwoho da 1, afe 2020. 𓀠 30
Obi tɔ abɔdinkrataa.
Sɛdea e hu abɔdinkrataa bɔne.
E tumi hwehwɛ adwumakuw wɛbsaete wɔ, "https://nab.gov.gh".
NAB tumi sese wo abɔdinkrataa amanaman.